यौन सम्पर्क पछि महिलाहरुले के सोच्छन् ? एक पटक अवस्य पढ्नु होला ? - presschautara
यौन सम्पर्क पछि महिलाहरुले के सोच्छन् ? एक पटक अवस्य पढ्नु होला ?
कुन मानिसलाई कस्तो खालको यौन सम्पर्कको शैली मन पर्दछ भन्ने कुरा समग्रमा भन्न गाह्रो हुन्छ, किनकि मानिसका रुची फरक फरक हुनसक्छन् ।
यौन सम्बन्धले महिला र पुरुषविचको सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाउँछ भनिन्छ, तर कतिपयको भने यौनसम्पर्क पछिको सम्बन्धमा विचलन भएको पनि पाइन्छ । यौनसम्पर्कपछि महिलाहरूले आफ्नो पुरुष साथी र आफूबारे कस्ता कुराहरू सोच्न सक्छन् ,, यौनसम्पर्क पछि महिलाहरूले सोच्ने १२ कुराहरू यसप्रकार छन् ।
प्रकाशित समय : ०२:१५ बजे
युईएफए च्याम्पियन्स लिगमा बायर्नलाई ८ अंकको अग्रता, बार्सिलोना बराबरीमा रोकियो